Zvemagariro Ndiro Dambudziko, Kwete Midhiya | Martech Zone
Zvemagariro Ndiro Dambudziko, Kwete iyo Midhiya
Muvhuro, July 1, 2013 Douglas Karr
Nezuro, ndakanzwa nyaya huru yeshamwari nevavengi. Iyo nyaya yanga iri yekuti zvakanyanya kuomera sei kuita shamwari kupfuura muvengi. Muvengi anogona kuitwa mune nyaya yenguva, asi kazhinji hushamwari hwedu hwaitora mwedzi kana makore kugadzira. Sezvaunotarisa kune vezvenhau, iyi zvakare inyaya ... iwe kana bhizinesi rako mungaite chimwe chinhu chakareruka sekutumira yakaipa tweet uye Internet ichaputika neruvengo. Vavengi vanopenga.
Panguva imwecheteyo, zano rako rekupa vatengi svikiro rekupindura uye kupa kukosha kwavari kunogona kutora mwedzi, kana kunyangwe makore, mutengi asati akoshesa kukosha uye chiremera kubva kune ako enhau nhamburiko. Muchokwadi, kuedza kwako kunogona kusazombokura kuita hushamwari pamhepo sezvaunotarisira.
Zvakanyanya kuoma kuita shamwari kupfuura muvengi.
Nyaya yacho yanga isiri yekuve online… yainyatso kubva mundima yemubhaibheri. Handisi kureva izvozvo kusimudzira chero pfungwa, kungo tarisa kuti dambudziko iri harina kutanga nevezvenhau. Dambudziko ndere hunhu hwevanhu, kwete nechero nzira yekudyidzana Zvemagariro midhiya zvinongopa veruzhinji foramu kwatinoona idzi nyaya dzichiunzwa kujoni.
Sezvo ini ndichiona iyo Interwebs ichirwisa vakawanda vanozivikanwa, vezvematongerwo enyika uye makambani, ndinonyatso kushamisika kuti ndeapi mashandiro enhau enhau acharatidzika senge mune ramangwana. Ivo vanozviti gurus vanoparidza kujekesa uye vanoda kuti vanhu, vatungamiriri nemakambani atinoteedzera vawanikwe online… uyezve tinovarova pamusoro pemusoro kana vakanganisa. Ko mabhenefiti acharamba achidarika mutengo here?
Zvakanaka… muhupenyu isu tinoitawo vavengi zviri nyore… asi hazvititadzise kubva mukushandisa nguva yekuita uye kuchengetedza hushamwari hukuru huri vapenyu. Zvinogona kuve nyore kuita muvengi kupfuura shamwari, asi mabhenefiti eushamwari anokunda chero njodzi yekugadzira muvengi.
Pedza Email Kuwedzeredza neUnroll.me
WordPress Chengetedzo uye Chengetedzo
Jul 1, 2013 pa 9: 45 AM
Nyaya inonakidza asi chinyorwa hachipi chero hypothesis semhinduro. Ndichiri kusimudza nyaya yakanaka pachayo. Tnx
Jul 1, 2013 pa 11: 20 AM
Ini handina mhinduro - asi ndinotarisira kuona kuti makambani anogadzirisa sei nzira dzesocial media kana kuti vatengi vanoita sei pakukanganisa kwesocial media sezvo nguva ichienderera.